Wana Rubatsiro Kutumidza Bhizinesi Rako neChikwama | Martech Zone
Wana Rubatsiro Kutumidza Bhizinesi Rako ne squadhelp
Chishanu, January 11, 2019 Svondo, Ndira 13, 2019 Douglas Karr
Unoda kunzwa yekumaka inotyisa nyaya? Kambani yako inoronga kuvhurwa kwayo uye inodyara madhora zviuru zana nemakumi mashanu mudomeini, zita, uye kuvhurwa… kungoita kuti zvese zviputsike kana iwe uchinge waziva kuti FBI ine ongororo yezita rimwe chete rinoenda kuruzhinji… 3VE.
Hazvirevi kuti [Sosaiti parizvino isina zita] aigona kunge akaita chero chinhu kufanofungidzira mhando iyoyo yenyaya. Ndiri kushamisika zvechokwadi, zvakadaro, kuwanda kwemakambani asingaite zvakanyanya kushingairira kuzvidana mazita. Ndakaziva mabhizinesi akati wandei akashandisa tani yemari nemasangano ekushambadzira, chete kuti vaone kuti zita ravo raive nezvirevo zvakafanana pasi rose, kana kunyangwe mune imwe indasitiri.
Imwe kambani yandaishanda nayo yakandibhadhara kuti ndiwane rubatsiro rwekutsvaga. Dambudziko randaive naro nderekuti mhando yavo yaive yakafanana nechitoro chepamberi chepainternet mune imwe indasitiri. Nekuda kweizvozvo, pakave nekukanganiswa ipapo ipapo vanhu vakatadza kuvawana online… kunyangwe vachinyora zita ravo rebhizimusi mumhedzisiro.
Imwe kambani yandakabatsira ingadai yakatsvaga zvakapusa zveGoogle kuti vaone kuti zita ravo raive padhuze neresaiti isina kukodzera. Ivo vachiri kuunza pane tarisiro nyowani isiri iyo inofara kuti vashandi vavo vanyora mune isiriyo URL.
Squadhelp imusika paunogona kuwana rubatsiro kutumidza bhizinesi rako, kutsvaga iro rinowanikwa zita rezita, uye kutowana rubatsiro kusimudzira logo yako. Ivo vakanyora ebook rakakura rinokudhonzera iwe kuburikidza nematanho masere ekutumidza zita rako bhizinesi:
Chii chiri bhizinesi rako 'chinangwa?
Ndivanaani vateereri iro bhizinesi rako richange richishandira?
Chii chakasarudzika nezve bhizinesi rako? Unhu hwako chii?
Tsvaga rubatsiro kubva kune zvimwe zvisikwa (ndiro basa ravo) kufunga nezita.
Kanda mazita asina musoro.
Ita ongororo yemitauro kuona kuti zita rako harivhiringidze kana kukodzera mune mimwe mitauro.
Dzivisa kumhan'arirwa nenyaya dzechiratidzo.
Ive nechokwadi icho usati waenda kurarama!
Squadhelp ine nharaunda yezvakagadzirwa zvinokubatsira iwe kuti uuye nemazita emabhizinesi akasarudzika. Maitiro acho akanyatsojeka:
Tanga Mutambo Wako - Pedzisa yavo inokurumidza, yakapusa purojekiti pfupi template, uye ivo vanozoigovana nharaunda yedu yevanopfuura makumi manomwe ezviuru zvisikwa.
Pfungwa Dzotanga Kudira Mukati - Iwe unozotanga kugamuchira zita mazano - akagadzirwa chaizvo iwe - mukati memaminetsi. Vazhinji vemakwikwi vanokushandira iwe panguva imwe chete! Makwikwi chaiwo ekupa mazita anogamuchira mazana emazita mazita mazano. Pfungwa dzese dzinoongororwa otomatiki kuti URL iwanikwe.
Shandira pamwe nekutaurirana - Ona zvese zvaunotumira kubva kumakwikwi ako dhibhodhi. Vhara manyorero, siya zvakataurwa woga, uye tumira mameseji eruzhinji, uchitungamira maitiro kuenda kuzita rakakwana.
hunotsigira - Sarudza zita rako nechivimbo. Yedu yakasarudzika yekusimbisa maitiro inosanganisira echikwata cheki, trademark kuongororwa kwenjodzi, kuongorora mitauro, uye kuyedzwa kwehunyanzvi vateereri.
Sarudza anokunda wako! - Kana makwikwi ako apera, zivisa uyo anokunda - uye nyora zita racho. Iwe unogona kunyange kudzokera kuScadhelp kunovhura Logo Dhizaini kana Tagline chirongwa chezita rako.
Vhura Mazita Anokwikwidza Tarisa Kunze kwavo Musika
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yedu affiliate links ye Squadhelp mune ino positi.
Tags: kuisa chiratidzo chebhizinesi rakokutumidza bhizinesi rako
Email Kushambadzira Statistics
Vanhu Vs. Chatbots: Ndiani Achagona Kutarisira Kwevatengi?